Allgedo.com » 2012 » June » 27
Home » Archive Daily June 27th, 2012 Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo maanta ka qeyb galay Sanadguuradii 35-aad ee Dowladda Jabuuti (Sawiro) Jun 27, 2012 Muqdisho, Somalia (AOL) - Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr.Cabdiweli Maxamed Cali, ayaa maanta ka qeybgalay Munaasabad lagu maamuusayay 35 sano guuradii ka soo wareegtay xiligii ay xurnimada qaadatay dowladda Jabuuti.
Munaasabadda lagu maamuusayay Sanadguuradii 35-aad ee xurnimada Jabuuti oo Magaalada Muqdisho lagu qabtay ayaa waxaa ka soo qeybgalay, Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya ahna Ku-Simaha... Barnaamijka Dareenka shacabka iyo Siyaasiga ee HCTV oo faahfaahin ku sameeyey shirkii Somaaliya iyo Somaliland ee ka dhacay dalka Ingariiska (Daawo Video) Jun 27, 2012 Barnaamijka Dareenka Shacabka iyo Siyaasiga ee ka baxa Horn Cable Television (HCTV) habeyn kasta oo Talaadada ah ayaa falanqayn ku sameeyey qodobadii 8-da ahaa ee kasoo baxay shirkii duleedka magaalada London ee dalka ingariiska ku dhexmarey dowladda Soomaaliya iyo maamulka Somaliland, taasoo la filayey in laga wada hadlo qodobadii muhiimka ahaa ee mudada dheer la sugaayey oo ahaa (Midnimada Soomaaliya... Ahlusunnada Konfured, Raskambooni iyo IGAD oo Shir maamul loogu sameynayo gobolada Jubbooyinka uga furmaayo magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Jun 27, 2012 Nairobi, Kenya (AOL) – Wararka naga soo garaya Magaalada Nairobi ee Xarunta Wadnka Kenya aya waxaay tibaxayaan in Magaaldaasi u ka socdo qabanqabada Shirweyne ay iskugu imanayaan Maamulka Ahlusunna ee Gobollada Konfureed iyo Jabhada Raskambooni iyo Urur Goboleedka IGAAD.
Shirkaan ayaa waxaa diirada lagu sarayaa sidi Maamul ay dadka daga Gobolada Jubbada hoose Jubbada dhexe iyo Gedo u... Odayaasha Dhaqanka ee Muqdisho ku sugan oo iska soo xulay 26 xubnood oo qaabilsanaan doona xalinta wixii qilaaf ah ee ku dhex jira Oday dhaqameedyada. Jun 27, 2012 Muqdisho, Somalia (AOL) – Kaddib markii ay intii muddo ahba socdeen warar sheegayay in Odayaasha dhaqanka ee ku sugan Muqdisho ay ku jiraan kuwo aan ka tirsaneyn oday dhaqameedyadii soo jireenka ahaa ayaa si arrintaasi xal waara looga gaara waxay odoyaasha Dhaqanka Soomaaliyeed iska soo xuleen gudi qaabilsanaan doona in ay xaliyaan wixii khilaad ah ee ka jira odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed... Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo maanta u ambabaxay dalka Uganda (Sawiro) Jun 27, 2012 Muqdisho, Somalia (AOL) – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr.Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta u ambabaxay magaalada Kampala ee dalka Uganda.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in socdaalkiisa uu ku wajahan yahay dalka Uganda, Isagoona kulamo la qaadan doono Madaxweynaha dalka Uganda Mudane Yoweri Museveni.
Wuxuuna Ra’iisul Wasaaraha oo saxaafadda kula hadlayay Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde... Hay’ada SADO oo maanta soo gabo gabaysay Siminaar socday mudo 5 cisho ah (Sawiro) Jun 27, 2012 Munasabada loo qabtay xiritaanka siminaarkan oo ay ka faa’iidaysteen mudada uu socday 60 ruux oo ka mid ah ganacsatada yar yar ee degmada Caabudwaaq ayaa lagu soo gaba gabeeyay Xaafada Oktoobar ee magaalada Caabudwaaq, ayada oo dhanka fankana ay gacan ka geysatay Hay’adda Oxfom.
Dadka ka faa’iidaystay siminaarkan mudada uu socdy ayaa waxaa kamid ahaa dadka haystay ganacsiga hoose... Gudiga dhaqaalaha ee garoonka Caabudwaaq oo helay Qaybtii Sadexaad ee dhaqaalo loogu tala galay Garoonkaasi. Jun 27, 2012 Gudiga dhaqaalaha ee garoonka Caabudwaaq oo helay Qaybtii Sadexaad ee dhaqaalo loogu tala galay Garoonkaasi.
Gudiga dhaqaalaha garoonka Caabudwaaq ayaa mar kale waxaa ay ka war bixiyeen dhaqaalaha qaybta sadexaad ee soo gaaray gacantooda iyo meelaha ay ka heleen waxaana ay uga mahad celiyeen cid kasta oo gacan ka gaysatay howsha dhismaha garoonka Caabudwaaq.
Gudiga ayaa sheegay in ay dadka qurbaha... Axmed Siilaanyo “Mar walba waxaan ku adag nahay gor gortanna aan ka galeyn madax banaanida iyo jiritaanka Somaliland” (DHAGEYSO) Jun 27, 2012 Madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo oo xalay ka qeyb galay munaasabad lagu maamuusaayay 26-ka Juun taa oo ka dhacday Madaxtooyada Hargeysa ayaa sheegay in marnaba aanay gor gortan iyo wax la mid ah ka galeen madax banaanida Somaliland.
Siilaanyo waxa uu sheegay in Soomaaliya ay yihiin dad walaalo ah laakiinse aanay isku imaan kareen, isagoona sheegay in Somaliland ay gaartay horumar... Radio Allgedo/ Waraysiyo